New-nnukwu SIGMA fp L na Atomos Ninja V ka akwadoro maka 4Kp30 na HDp120 ProRes RAW ndekọ | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Mmepụta Ihe » New-format SIGMA fp L na Atomos Ninja V ka akwadoro maka 4Kp30 na HDp120 ProRes RAW ndekọ
Atomos nwere obi ụtọ ịkpọsa na SIGMA fp L ọhụrụ ga-enwe ike idekọ Apple ProRes RAW HDMI mgbe ejikọtara ya na Ninja V 5 ”HDR monitor-recorder. Ninja V ga-edekọ ihe vidiyo 4Kp30 12-bit ProRes RAW site na ihe onyonyo ihe oyiyi 61-megapixel nwere nkwụsị 13 dịnụ dị egwu.
Ihe ọhụrụ SIGMA fp L bụ obere obere igwefoto kachasị na ụwa ma rụọ ọrụ *. Ọ na-abịa site na mgbatị mkpuchi aluminom siri ike na nke dị fechaa, na-atụle ya naanị 375g. Zuru okè maka mmiri na gimbal. Ọ na-eji L-Mount, oghere elekere kachasị maka ese foto na-enweghị enyo. Ikwe ka ejiri ya na lens dị iche iche nyere Leica, Panasonic na SIGMA onwe ha.
‣L-Mount bụ ụghalaahia edenyere nke Leica Camera AG.
* N’ọnwa Mach, 2021
Nke ziri ezi 5 ”1000nit HDR ngosipụta dị elu nke Ninja V na-enye ndị ọrụ ohere ịlele akara RAW na HDR na nhọrọ nke usoro HLG na PQ (HDR10). Ihe nlele ahụ na-enye mmetụ mmetụ ahụ aka na ngwaọrụ dịka ọkwa ntanetị, bulie ma ọ bụ tinye ọnụ na elu ka ndị ọrụ wee lelee elekwasị anya n'akụkụ ọ bụla ma mee mgbanwe ọ bụla iji nweta oke HDR ma ọ bụ SDR.
Ninja V & SIGMA fp L Nchikota
SIGMA fp L na Ninja V nchikota bu ihe eji eme ihe kwesiri ekwesi maka ihe omuma dika aka aka, tinye ya na nkuku ma obu tinye ya. Ihe nkiri TV, ihe nkiri indie, mmemme ụlọ ọrụ, akwụkwọ akụkọ na ọbụna ihe nkiri eserese ma gbakwunye na ikike ịdekọ ProRes RAW. Nchikota a na-enye ndị na-ese ihe onyonyo ego na nhọrọ iji jikwa ProRes RAW.
White Balance na ISO Nkwado
Atomos na SIGMA kwadoro ịnye ndị ọrụ ikike zuru oke nke usoro ProRes RAW nke pụtara inye ha oke mgbanwe mgbe ọ na-abịa na-edezi koodu ahụ. SIGMA fp L ga - akwado White Balance na ISO sliders na Final Cut Pro.
Atomos Onye isi oche Jeromy Young kwuru, sị: “Obi dị m ụtọ na SIGMA na-agbakwunye igwefoto ọzọ dị ịtụnanya na usoro ha nke RAW si Atomos nyochaa ndekọ. Tinye na ntinye aka ha ịnabata ike na ikike nke ProRes RAW site na ịbute metadata igwefoto niile chọrọ iji nye ohere maka mgbanwe kachasị na post-mmepụta ”
ProRes RAW - ụkpụrụ ọhụrụ maka RAW
Atomos dị mpako ịgbakwunye igwefoto ọzọ na-atọ ụtọ na usoro eco-sistemụ ProRes RAW na-eto eto. N'ime 2020 niile na 2021 ProRes RAW gara n'ihu na-ewu ọkụ na igwefoto 30 na-akwado ya Atomos na ngwakọta ProRes RAW, na-eme ka ọnọdụ ya dị ka ọkọlọtọ ụlọ ọrụ maka vidiyo vidiyo RAW. Ọ dị mma ịhụ na ProRes RAW na-akwadowanye nkwado gafee ọtụtụ ụdị igwefoto sitere na ndị nrụpụta igwefoto dị iche iche, na-egosi na ha kwụsiri ike ma na-etinye ego n'ọdịnihu nke ndekọ ProRes RAW. ProRes RAW na-ejikọta uru anya na arụmọrụ nke vidiyo RAW yana arụmọrụ dị egwu nke oge ProRes. Usoro ahụ na-enye ndị na-eme ihe nkiri ohere dị ukwuu mgbe ha na-agbanwe ọdịdị nke onyonyo ha ma na-agbatị nchapụta na ndò zuru oke, na-eme ka ọ dị mma maka arụmọrụ HDR. Ma ProRes RAW, na bandwidth dị elu, na-akwadoghị ProRes RAW HQ na-ejikọtaghị. Nha njikwa ahaziri ahazi na-eme ka ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, njikwa njikwa na nchekwa. A na-akwado ProRes RAW n'ụzọ zuru ezu na Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro na uchu Media Composer tinyere nchịkọta ngwa ndị ọzọ gụnyere ASSIMILATE SCRATCH, Colorfront, FilmLight Baselight na Grass Valley Edius.
Atomos dị iji nyere ndị ọkachamara okike aka igbutu ihe mgbochi teknụzụ site na imepụta ihe dị mfe iji, mbepụ 4K na HD Apple ProRes nyochaa / ndekọ. Ngwaahịa ndị a na-enye ndị ọkachamara vidiyo ngwa ngwa, ogo dị elu yana usoro mmepụta ihe dị ọnụ ala, ma ha mepụtara maka mmekọrịta mmekọrịta, YouTube, TV ma ọ bụ sinima. Atomos na-aga n'ihu na-egosipụta nkwa ya itinye ndị ọrụ n'ọnọdụ mbụ site na ihe ọhụrụ na-aga n'ihu na isi ihe dị ịtụnanya. Companylọ ọrụ ahụ mepụtara AtomOS sistemụ arụmọrụ raara nye ndekọ vidiyo nwere ọmarịcha ngwa mmetụ aka onye mmetụ ihu ma bụrụkwa onye mbụ mejuputara usoro Apple ProRes RAW ọkachamara maka idekọ na igwefoto sinima. Atomos dabere na Australia nwere ọfịs na USA, Japan, China, UK na Germany ma nwee netwọkụ mmekọrịta na-ekesa ụwa niile.
Previous: CRAS Preps Pro Audio Students for Life Mgbe Gụsịrị Akwụkwọ
Osote: Onye a ma ama Colorist Steven Bodner sonyeere Shop Foto